आज विश्व स्वास्थ्य दिवस : स्वास्थ्यप्रति हामी कति सचेत ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
आज विश्व स्वास्थ्य दिवस : स्वास्थ्यप्रति हामी कति सचेत !
काठमाडौँ, २४ चैत, आज अप्रिल ७ अर्थात विश्व स्वास्थ्य दिवस । ‘स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचः सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने नारा सहित नेपालमा पनि दिवस मनाइदैछ । विश्व स्वास्थ्य स‌ंगठनले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हुनका लागि निर्धारण गरेका सूचकमध्ये नसर्ने राेगकाे निदान पनि एक हाे । तर नेपालमा यसकाे समस्या वर्षेनी बढ्दाे छ ।
अस्वस्थकर जीवनशैलीले नसर्ने राेगकाे जाेखिम बढाउँदै लगेकाे छ । सुन्दा सामान्य लागे पनि मानिसमा तयारी खाना खाने, व्यायाम नगर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाे छ । नसर्ने राेगमा विशेष गरी ह्रदयघात, मस्तिष्कघात, क्यान्सर, मधुमेहजस्ता राेग बढ्दाे रहेकाे मुटुराेग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीले बताए । उनी भन्छन्, अस्वस्थकर जीवनशैलीले नसर्ने राेगकाे जाेखिम महामारीकाे रुपमा बढ्दै गएकाे छ ।
८० प्रतिशत मुटुराेग र ४० प्रतिशत क्यान्सर जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ । विश्वमा वर्षेनी ४ कराेड १० लाख मानिसकाे मृत्यु नसर्ने राेगका कारण हुने गर्छ । घरमा बनाएकाे ताजा खानेकुरा, हरियाे सागसब्जी, फलफूल खान उनकाे सुझाव छ । चिल्लाे, पिराे, तयारी खाना, जंक तथा फास्ट फुड, धुम्रपान तथा मध्यपान त्याग्नुपर्छ । उनका अनुसार दिनमा कम्तीमा पनि ३० मिनेटकाे व्यायाम गर्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ”हामी धेरै टेबल वर्क गर्छाै तर कुनै व्यायाम हुँदैन । त्यसैले दिनमा कम्तीमा आधा घन्टा व्यायाम गर्नुपर्छ । साथै राेग लाग्नुभन्दा पहिले नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरे यस्ता राेगबाट बच्न सकिन्छ ।”
सुरुवाती चरणमै नसर्ने राेगकाे पहिचान नहुनु यसकाे ठुलाे समस्या हाे । त्यसैले यी राेगकाे निदानकाे पक्ष सधैं पेचिलाे बन्दै गएकाे छ । त्यसलै अस्वस्थकर जीवनशैली अपनाइ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराए यस्ता प्राणघातक राेगबाट बच्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: 2019-04-07 2019-04-07 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged विश्व स्वास्थ्य दिवस
विप्लव समूहको ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेश उप–प्रमुख श्रेष्ठले गरे आत्मसमर्पण
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका नासु चन्द ५२ हजार घुससहित पक्राउ
संविधान संशोधन आवश्यक छ :नेता पौडेल
प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको छन्जु क्षेत्रीय कमिटी गठन
तातोपानी नाका खोल्ने तयारी भइरहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको भनाई
Tags: विश्व स्वास्थ्य दिवस